Indlu Yokuqashiswa Esigabeni 45, eNoida
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Uttar Pradesh » Noida » Sector 45 » Indlu Yokuqashiswa Esigabeni 45, eNoida1
Usayizi waphansi: 3625 Sq feet
Ifulethi eli-5 bhk elinezitezi eziningi elisePrateek Group Stylome, eMkhakheni wama-45. Inendawo engama-3625 sqft futhi itholakala ngokuqasha ama-Rs. 50,000. Indlu inefenisha encane. Umnyango wayo omkhulu ubheke ohlangothini olusempumalanga. Kwenziwa ngendlela yokunikeza abahlali impilo ethokomele. Ixhumeke kahle ezindaweni zedolobha.
Isigaba 45 siyidolobha elingaphansi kweGurgaon, eliseduzane ne-NH 8 noma iDelhi-Gurgaon Expressway. Sizungezwe izindawo ezibandakanya uMkhakha 46, uMkhakha 31, uMkhakha 39, uMkhakha 41 kanye neBindapur.ConnectivityDelhi-Gurgaon Expressway iyindlela ehamba phambili yokuxhumana ne-Indira Gandhi International Airport kanye neningizimu Delhi. I-IGI Airport ngamakhilomitha angama-17.4 ukusuka lapha. Le ndawo futhi ihanjiswa yi-NH 248A. Isiteshi sikaMasipala weHUDA City Center siseduze kakhulu nomakhelwane, ebangeni elingamakhilomitha angama-2.1 ukusuka lapha ngomgwaqo i-Arya Samaj Road neNetaji Subhash Marg. Le ndawo isetshenziswa ama-auto kanye nomjikelezo wama-rickshaws kanye namatekisi angakhokhelwa.I-Revenue Estate ku-Sector 45Sector 45 inengqalasizinda yezenhlalo eyakhiwe kahle, eyenze kwaba ngumakhelwane ofunwa ngabantu abafuna izindlu. Kuza amaphrojekthi amaningi ezindlu kule ndawo. Lokhu kunikela nge-villa namafulethi kubafuna izindlu. Kuhlinzekwa inani elikhulu lezinsiza emiphakathini ukuze kusizakale abaninikhaya. Ingqalasizinda YezenhlaloIzingqalasizinda zenhlalo, zomphakathi nezomzimba zoMkhakha 45 zakhiwe kahle futhi zanele ukusekela impilo yasekhaya. Kunezikole eziningi ezidumile zaseGurgaon ezisendaweni eseduze nendawo efana neSt Angels Junior School, i-Euro International School kanye neDelhi Public School. Kunabahlinzeki bezempilo abaningi endaweni okubalwa izibhedlela ezi-super and multispecialty. Izibhedlela eziseduzane noMkhakha 45 zibandakanya iFortis Memorial Research Institute, Artemis Health Institute, Mayom Hospital kanye neMax Hospital. IHSBC Bank, i-UCO Bank kanye ne-Indian Overseas Bank zinamagatsha akhiwe kule ndawo.